Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo gudoomiye ka ah Magaalada ugu Amaanka Xun Soomaaliya oo ku baaqay Doorasho Qof iyo Cod ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo gudoomiye ka ah Magaalada ugu Amaanka Xun...
Cumar Maxamuud Maxamed Filish Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin doorasho qof iyo cod ah in gobolka Banaadir ay ka dhacdo.
Cumar Filish ayaa intaas ku daray in taas badalkeeda ay kasoo horjeedaan doorashooyinkii dadbanaa ee 2016 lagu soo doortay dowladda hadda dalka ka arrimisa.
“Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay ka qeyb qaataan doorashada qof iyo codka ah ee la doonayo in dalka ay ka dhacdo si ay u helaan doorkooda siyaasadeed ee dalka” ayuu yiri Cumar Filish.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay u diyaaraan tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay siiyaan doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalka.
“Doorashada dadban dadka qaar waxay ku doonayaan inay xilalka sii hayaan, taasoo u wanaagsaneyn dadka Muqdisho, waxaana idin cadeynayaa in dowladda Soomaaliya ay u hiilineyso Shacabka Muqdisho loogana baahan yahay inay garab istaagaan” ayuu yiri Guddoomiyaha.
Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa maamul magaalada ugu Amaanka Xun xiligaan Gayiga Soomaaliya iyadoona xalay kaliya ka dhacday 10 weerar oo kala gadisan wqxaase Cajiib sida uu maamulkiisa ku qaban karo Doorasho Qof iyo Cod ah
Khilaaf weyn ayaa ka taagan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta marka laga gaaro bilowga sanadka 2021-ka oo uu dhamaan doono muddo xileedka madaxda hadda talada heysa.
Previous articleC/salaan Cali “Waxaan ku guulaysanay inaan iskuulkii ugu horreeyey Garoowe ka dhisno 2004-tii” [WAREYSI]
Next articleOmar Mohamud Mohamed Filish, the mayor of Somalia’s most insecure city, calls for free and fair elections